Inqubo ngesinqumo ukuphathwa izixazululo - isikhashana ukhiye emsebenzini ukuzibonakalisa eziningi ezihlobene nemisebenzi ukuphathwa. Namuhla, ukwamukelwa kwenkolelo-izixazululo elilungile mayelana nodaba oluthile kubaluleke kakhulu, njengoba ekwandiseni Ububanzi bemisebenzi, kwandziswa kwelinani letikhungo izakhi kanye nobudlelwane. A inkinga ubuhlobo phakathi ezihlukahlukene akuhileli ukungaqiniseki ekuqondeni isimo sangempela, ngokuyinhloko ngenxa isici womuntu, ukufiphala kolwazi.
Akulungile ukucabanga ukuthi sibhekene nesinqumo kukhethwa omunye izifundo okungenzeka senzo. Izici ukuphathwa ekuthathweni ziyabonakala yokuthi uma ziqhathaniswa ukukhetha eyimfihlo izixazululo unesibopho kakhudlwana futhi kulandela ikambiso ehlelekileko elidinga ukuba uqeqeshwe. Kuyadingeka ukukhumbula ukuthi zonke izinqumo zokuphatha kumele isekelwe ekuhlaziyweni isimo esikhona kanye kumele libonise isiqondiso kangcono ukuthuthukiswa kwamabhizinisi.
Kunezinhlobo ezimbili zama-elementi ezinika izinqumo zokuphatha inqubo izinga.
Eyokuqala - ukulandelana yezenzo. Lena iphuzu elibaluleke kakhulu, kusukela zonke izinqumo zokuphatha kumele kuthathwe ngesisekelo ulwazi olufanele futhi kunembile. Lezi zihlanganisa: Ukusungula inqubo ukuxazulula inkinga ethize, sitholakele isimo, ukwakheka izixazululo kungenzeka, futhi yabo kuhlatiya ngokuya ngemiphumela ukuqaliswa isinqumo zokuphatha kanye nokuhlolwa kokusebenza yayo.
Okwesibili - ngokugcina izici eziyinhloko. Lezi zinto zibandakanya: ilungelo isinqumo ethize, ubudlelwane ngesisekelo okukhethayo siqu isikhathi ofanele kanye exchange of ulwazi mayelana nenkinga. Zonke lezi zici zingaba kuncikene, futhi akukho.
izinqumo Management - hhayi ukuthi abanye, njengoba kukhethwa enye, okuyinto eyenziwa ikhanda ngaphansi losegunyeni kanye kuhloswe la ekufezeni injongo ibhizinisi. Ikakhulukazi umphathi onekhono yikhono njalo futhi ngenjongo iya ku nodaba. Iphuzu okubalulekile ukuthi incazelo kuqala ukubhekana nomthelela obalulekile inqubo izinqumo.
Inqubo ukuphathwa ekuthathweni - ukulandelana eyindilinga yezenzo ngenhloso yokuxazulula izinkinga ezithile, kanye nenhlangano iboniswa ukuhlaziywa, ukuthuthukiswa ongakhetha usukumise, utsatse izixazululo eziqondile futhi wokuthatha amagadango eziyinkimbinkimbi.
Ukuhlaziywa ukuphathwa isimo sidinga ukucubungula ukwaziswa ngaphambili eziqoqiwe. Kulesi sigaba, bezibona inhlangano imvelo ngaphakathi kanye nabangaphandle. Idatha mayelana nesimo sezindaba enhlanganweni ukuza izisebenzi core ngubani ahlaziye ulwazi elenza angakwazi ukuhlonza lezo nkinga. Lokhu kulandelwa ukuhlonza futhi ekwakhiweni inkinga, ngenxa ukwakhiwa yayo. Kufanele sizame ukuthatha izinqumo okumele Kwakuyohlanganisani inombolo okungenani nobunzima esikhathini esizayo.
Ukuthuthukisa izixazululo ongakhetha zihlose ukuthola elilungile kakhulu. Kodwa umkhuba, ukulawula akanayo esiningi, ngakho ngokuvamile kungukuthi ufuna ukhetho best futhi iphila ukuxazulula le nkinga.
Ukulandela ukuthuthukiswa izixazululo okunye kufanele ushiya afanayo izixazululo. Leyo nhlangano, kodwa hhayi umholi eziyinkimbinkimbi kumelwe uzamukele, futhi indlela engcono kakhulu iwukuba ukuqasha abasebenzi ezikhethiwe ukuthi babambe iqhaza esivumelwaneni.
Okulandelayo wukuthi sihlele wokuthatha amagadango sokubhekana nenkinga. Phela, kuphela inhlangano nokulawula imisebenzi efanele nge ngokuletha abalazi ngamunye isisebenzi abathintekayo emsebenzini wakhe kuzoholela Chile oqondile - ikhambi izinkinga ngaphakathi ukuphathwa amasu okwenza izinqumo.
KoMphathi ukuphathwa isakhiwo: izici, ngebuhle nebubi
Birzhin Andrey Aleksandrovich: Biography, empilweni, benze izinto zasemsebenzini
Indlela ukupheka ukholifulawa okumnandi. iresiphi esheshayo
Ruslana: ukuthi igama, izici zayo
Winter ezikhangayo - engcono emndenini iholide
HC "Panthers Florida": umlando ukwakheka kanye uhlelo wamanje
Ingabe kuyiqiniso ukuthi amahlaya northerners belusizi kakhulu?
Clinical Isikhungo sokuxilonga "Ultramed" Omsk: incazelo, oxhumana nabo kanye nokubuyekeza
"Del Sol Country endlini" (4 * Ihhotela), eRussia, Anapa: incazelo, uhlu lwemisebenzi, kobufakazi, izithombe